Eyona ndawo ilungileyo yeZirconia Lip brickin yeglasi yomlilo yoMvelisi kunye neFektri | Funmeet
I-Zirconia Lip yezitena zomlilo weglasi
Ukuze kuphuculwe uzinzo lobushushu obuphezulu be-aerogels emsulwa ye-ZrO2, ii-aerogels ezihlanganisiweyo ze-ZrO2-SiO2 zilungiselelwe ngokuwisa i-epoxy propane nge-TEOS njengomthombo wesilicon kunye ne-zirconium nitrate njengomthombo we-zirconium. Iziphumo zomyinge we-zirconium silicon kunye nobushushu kunyango lobushushu kulwakhiwo kunye neepropathi ze-aerogels ezidityanisiweyo ziphandiwe. Iziphumo zabonisa ukuba xa umyinge we-zirconium kunye ne-silicon yayingu-1: 1, indawo engaphezulu ye-aerogels edityanisiweyo yayiyeyona inkulu, eyayiyi-551.7 m2 / g. Indawo engaphezulu emva konyango lobushushu kwi-1000 C yi-239.3 m2 / g, kunye nommandla othile wonyango emva kobushushu kwi-1200 C ngama-89.5 m2 / g .. Xa kuthelekiswa ne-airgel eyi-ZrO2, i-ZrO2-SiO2 i-airgel edibeneyo elungiselelwe kolu phononongo inokuzinza okungcono kwe-thermal.
Photovoltaic Rolling Umzi mveliso weGlasi- HP ZrO2 Composite Ceramic Lip Brick
Ukucoceka okuphezulu kunye nokusebenza okuphezulu kwe-nano-zirconia yezitena zomlomo ze-ceramic ezenziwe ngezitena ze-Fangming NewM, i-Itis isetyenziswa kumda wangaphambili wokubumba imiqolo yemigca yemveliso yeglasi. Ubungakanani bale mveliso siyibonelelayo ungenziwa ngemfuneko ngokobungakanani efunekayo yoMthengi. I-Itis iqulunqwe ngamaqhekeza aliqela ngamalungu angenamthungo kunye nokuguda komphezulu kulawulwa ngaphantsi kwe-0.003 mm. Inokuqina kokuqaqamba kobushushu, ukhukuliseko olomeleleyo lokumelana ne-alkaline, ubomi obude kunye nomgangatho ophezulu wokuveliswa kweemveliso zeglasi njl. Sinokubonelela ngesantya esiphezulu. Iimveliso ze-ZrO2 nano-ceramic ezinobungakanani obukhulu kunye neemilo ezinzima, ubungakanani obunikezelweyo: Ubude be-200-1200MM, ububanzi be-200-1000MM, kunye ne-Height ye-15-50MM.
Iziphumo zabonisa ukuba emva kokuba i-mullite fibers ichukunyisiwe, imicu yasasazwa ngokulinganayo kwii-aerogels ezidibeneyo kwaye yadlala indima yenkxaso yamathambo. Amandla okunyanzelwa kwee-aerogels ezidityanisiweyo zonyuke ngokunyuka kweqhezu levoluyum yefibre. Xa iqhekeza lomthamo wefayibha yayili-10%, amandla oxinzelelo lwe-aerogels edibeneyo yafikelela kwi-0.408MPa (10% deformation). Kwangelo xesha, ukungeniswa kwefayibha kwakungekho siphumo sibonakalayo kulwakhiwo lwe-pore ye-net-dimensional kunye nepropathi yokugquma kwe-aerogels.
I-Ultra-high-temp ye-oxide edityanisiweyo yemveliso yeekeramiki zomhlaba, siya kubonelela ngezisombululo ezihlanganisiweyo ezijikelezayo ze-ultra-high-temp. ubushushu, ukumelana nokhukuliseko oluphezulu kunye neemeko zesicelo sokhukuliseko.
Izitena zeCubic Zirconia
Iglasi yesithando somlilo
Isitena esiphakamileyo seZircon
Ipleyiti yokugquma kunye nezitena zomlomo zirconium ephezulu pho ...